Indawo yokudlela yase-Ekru - I-Airbnb
Indawo yokudlela yase-Ekru
Anixi, Attica, i-Greece
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Alexandra
Ipulazi lama-acher amane kwelinye lamahlathi amahle kakhulu e-Athens, eGreece elinechibi langasese elingange-olympic, iklabhu yangasese. Kude ngemizuzu eyishumi ngemoto ukuya ekhasino edumile iParnitha kanye nemizuzu engama-20 ukusuka enkabeni ye-Athens.
I-ranch-villa yangasese inama-suites amabili anendlu yayo yokugezela kanye ne-jaccuzi. Iphuli yosayizi wama-olympic yangasese, iklabhu yangasese ye-disco, indawo enkulu kakhulu yangaphandle nengaphakathi yokuzijabulisa (igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela) kanye nezindawo zokucima umlilo ezimbili.
I-airconditioning nokufudumeza yonke indawo
Ukugcinwa kwendlu uma ucelwa ngemali eyengeziwe
I-HDTV engu-45" ene- I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Inombolo yepholisi: 00001153027
Hlola ezinye izinketho ezise- Anixi namaphethelo